Arla oo ganacsigeeda ku baahineysa EU iyo qaaradda Aasiya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Fredrik Persson/TT
Arla oo ganacsigeeda ku baahineysa EU iyo qaaradda Aasiya
La daabacay måndag 3 februari 2014 kl 17.32
Shirkadda Arla oo shirkad iswiidhish iyo daanish oo sameysa caanaha iyo cuntooyinka caanaha laga sameeyo ayaa lacag gaareysa 2.6 bilyan oo karoon ku maalgelineysa suuqyo cusub oo ay alaabteeda u iibgeyso oo laga bilaabayo Yurub iyo Aasiya. Lacagtaas waxaa lagu maalgelinayaa wershado ku yaal toban dal, iyo in wershad cusub farmaajada sameysa lagu furo Iswiidhen. Sidaasna waxaa soo werisey wakaaladda wararka ee TT.
Lacagtaas 2.6 bilyan dhan badankeed waxaa lagu maalgelinayaa Iswiidhen gudaheeda, halkaas oo dhowaan laga dhisay wershadda Yurub ugu weyn oo lagu sameeyo nooc farmaajada ama jiiska ka mid ah oo afka iswiidhishka lagu yiraahdo Keso.
"Waxaa noo muuqda baahi weyn oo loo qabo farmaajada noocaas, iyo inaan ku sugan buux dhaaf, sidaas awgeed ayaan u dhiseynnaa wershad," ayuu yiri Jörgen Greve oo ah maareeyaha soosaarka ee Arla Iswiidhen.
Maalgelinta ugu badan oo hal meel lagu sameeyo waxaa laga bilaabayaa dalka Denmark halkaas oo laga dhisaayo wershad cusub oo lagu sameeyo caanaha iyo farmaajooyinka aan laaktooska lahayn. Wershaddaasina waxay badeecad aan laaktoos lahayn oo aad looga doonayo dalalka Bariga Dhexe iyo Aasiya.
Sannadkii la soo dhaafay waxay shirkadda Arla qorshe ay ku cayrineyso 360 ka mid ah shaqaalaheeda si loo dhimo kharashyada shirkadda, balse wadaxaajood kadib ayaa tiradaas hoos loogu dhigay 250.